Soomaaliya oo digniin u dirtey shirkadda ARC ee dalka China oo ka hawl bilowdey Somaliland - Wargane News
Home Somali News Soomaaliya oo digniin u dirtey shirkadda ARC ee dalka China oo ka...
War ka soo baxay Wasaaradda Batroolka iyo Kheyraadka dabiiciga ah ee Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa digniin lagu siiyey shirkada ARC oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu eedeeyey in ay baaritaan shidaal ka wado gobolka Awdal.
Warka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay la socoto dhaq-dhaqaaqa ay wado shirkada ARC ugana digayaan in ay ku fududaato baaritaanka ay kawado buuraha Simoodi ee Gobolka Awda.
Agaasimaha Wasaaradda Batroolka ayaa sheegey in ay la xiriireen Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya waxna ka weydiiyeen shirkaddan, waxaana uu sheegay in aysan waxba kala socon, sidoo kale Safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiinaha ayaa dhankeeda sheegtey in shirkaddaani ay tahay mid dalka ku joogta si tuuganimo ah.
Dowladdu waxay fariin u dirtay dowladda Shiinaha oo ay kaga dalbatay in ay talaabo ka qaado shirkadaha laga leeyahay dalkeeda oo ay ka digtoonaadaan sida ay dowlada federaalka sheegtay baaritaan sharci daro ah in ay ka wadaan gudaha Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa warkan ka soo baxay wasaarada fariin loogu diray dhamaan shirkadaha kale ee shidaalka baarista ka shaqeeya “Waxaan uga digeynaa dhamaan shirkadaha caalamiga ah ee macdanta iyo shidaalka baara inay galaan heshiisyo sharci darro ah, oo heerkoodu ka hooseeyo habdhaqanka caalamiga oo ay isku dayayaan inay kula soo baxaan khayraadka Soomaaliya, kuna qaataan si raqiis ah oo aan waafaqsanayn sharciyada dalka iyo xeerarka caalamiga ah ee khuseeya macdan iyo shidaalka”.
Dhawaan ayaa maamulka Somaliland iyo Dowladda Federaalka ah kala saxiixdeen heshiis ay ka mid ahayd in aan la siyaasadeyn mashaariicda hormarineed.